Isiqingatha sokuqala sonyaka wokuthengisa kwimarike yemasheya | Ezezimali
Bambalwa abatyali mali abanokucinga ukuba isiqingatha sokuqala sonyaka besizakunyusa kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Kodwa inyani yile yokuba ukusukela kwiintsuku zokuqala zikaJanuwari ukuthenga izikhundla Bazinyanzela ngokuchazeka okuthile kwabafazi abathengisayo. Apho ilahleko enkulu yale nto ikhoyo ibikhona okanye ingabatyali mali abangaphandle kweemarike zezemali. Phakathi kwezinye izizathu kuba kusenokwenzeka ukuba ixesha lihambile ukuvula izikhundla ukwenza ukonga kwakho kunenzuzo.
Enye yezinto ezivelayo ngeli xesha kukuba ingaba oku kuphakama kwiimarike zesitokhwe kukutshintsha kwendlela okanye ngokuchaseneyo yinto ibuya ngenxa yokuwa ngamandla okwenziwe ekupheleni konyaka ophelileyo. Apho kungenakulityalwa ukuba emva kwento eninzi ekwakukudala ilindelwe yeholide zeKrisimesi khange yenzeke. Inyaniso yokuba akukho mathandabuzo ukuba babenako ukoyikisa indawo elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwaye ngoku bajonga ukuba babuyele kwiimarike ze-equity kwakhona.
Kwelinye icala, enye yeengxaki zabahlanguli kukuba lonyuka kangakanani olu lwenzekayo kwiimarike zezabelo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwinqanaba leziseko kwimarike yemasheya. Kuba ngokusebenza kwayo, konke kukhangeleka ngathi amaqhosha okumisela le nto ibalulekileyo kukuba ingaba isalathiso senani lokulinganisa lingadlula na kwinkxaso ebalulekileyo ebekwe Amanqanaba angama-9600.
1 Isemester efanelekileyo yabatyali mali
2 Amakethi akaxolelwanga kukungazinzi
3 Isitshixo sikumanqaku angama-9600
4 Lisindwe licandelo lebhanki
5 Ixabiso elinamaxabiso ahlengahlengiswe kakhulu
6 Ngobomi obuncinci ngaphaya kwengxowa
Isemester efanelekileyo yabatyali mali
Nokuba yeyiphi na indlela, inye into eqinisekileyo kwaye ukuba ezi nyanga zinenzuzo enkulu kubo bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngale ndlela, ayinakulityalwa ukuba inyanga kaJanuwari ayikhange inyuse kangako kwii-equities e-United States kangangeminyaka engama-30 kwaye esi sisizathu sokubhiyozela kwiimarike zezemali. Inxalenye ebangelwe sisigqibo sika Indawo yokuGcina eUnited States ngokumodareyitha iinjongo zayo ekusetyenzisweni kokunyuka kwamazinga enzala. Inyani ethe yakhuthaza abatyali mali ukuba bangene kwakhona kwiimarike zemali.
Kwelinye icala, inyani yokuba ixabiso lezabelo lalinomdla kakhulu ukuvula izikhundla kwimarike yemasheya ikwadlale indima ebaluleke kakhulu. Ayothusi into yokuba kwezinye iimeko ezinamaxabiso acacileyo ukutyeba kwaye ke ngoko banokubaluleka kokuphononongwa kwakhona. Kwezinye iimeko ezingaphezulu kwe-20% kwaye inokuba yeyona nto iphambili kwizicwangciso zethu zotyalo-mali. Kungenxa yokuba baya kuhlala benendlela eya phezulu kwiinyanga ezimbalwa ezizayo okanye kweyona meko imbi yokuhambisa imali de kube sekupheleni konyaka.
Amakethi akaxolelwanga kukungazinzi
Enye into esingenakuyilibala ekuqaleni konyaka kukuba inkqubo ecace gca ayiphuhliswa. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, igcwele imiqobo endleleni kwaye apho ukungazinzi yenye yezona zinto ziphambili zixhaphakileyo kuzo. Ngokunyuka okuphezulu kakhulu kwaye ngexesha elifutshane kunye nentshukumo eguqukayo eyenza abatyali mali abancinci nabaphakathi bahlwayele amathandabuzo. Akumangalisi ukuba, bengazi ukuba mabalindele ntoni ngokusekwe kule ntshukumo ngequbuliso kwiimarike ze-equity.
Le nto iyaqhubeka nokuba ngoyena mntu ubambisene nabo abatyali-mali banabo okwangoku, njengoko kukho okanye kungekho mkhuba uchaziweyo kwixesha eliphakathi okanye elide. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni umthamo wokuqeshwa yenye yezona zibuthathaka kule minyaka idlulileyo. Into enokuthi isuse kuhlaziyo olwenzekayo kwizokhuseleko ezenza ingeniso yelizwe lethu. Ngokungafaniyo nento eyenzekileyo kwimarike yemasheya kwiminyaka edlulileyo, apho kuyinyani ukuba umthamo weekhontrakthi wawuphezulu kakhulu. Ngokukodwa, kunye nexabiso elimele kakhulu kwimarike yaseSpain, njengaleyo imelwe ngu Iichips eziluhlaza: I-Endesa, iSantander, i-BBVA okanye i-Iberdrola, phakathi kwezinye ezifanelekileyo.
Isitshixo sikumanqaku angama-9600
Alithandabuzeki elokuba eli nqanaba lelona izakuseta umkhwa (I-bearish okanye i-bullish) yee-equities kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Isondele kakhulu kwizikhundla ezikhoyo kodwa kuyo nayiphi na imeko kuyanyanzeleka ukuba uyidlulise ngokwanela. Ngayiphi na imeko, kubonakala ngathi akukho lula kumzuzu wokudibana apho uqoqosho ngokubanzi lukhula khona. Akufanele ilibaleke ukuba ilizwe elibaluleke njenge-Itali ngoku likwimeko yokudodobala kobugcisa.
Kwelinye icala, kuyafuneka ukuvavanya kule mizuzu ukuba umgaqo-maliKwelinye icala leAtlantic okanye kwelinye, izakudlala indima ebaluleke kakhulu ukuze iimarike zokulingana zinganyuka okanye zehle ukusukela ngoku. Kwaye kwabo kufuneka ukuba abatyali mali abancinci nabaphakathi baqwalasele kakhulu ukwazi ukuba yeyiphi esona sigqibo banokuthi basenze ukuba bafuna ukwenza imali ngempumelelo kwimakethi yezezimali. Leyo yeyona njongo yakho iphambili. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa ezinokuphawula iimarike zezemali.
Lisindwe licandelo lebhanki
Ibex 35 kule veki iphelileyo ilahlekelwe yimfutho yayo xa yehla i-1,81%, nangona ngokuchaseneyo eyona nto ibalulekileyo kukuba ikwazile ukugcina inqanaba elibalulekileyo lamanqaku ayi-9.000. Apho eyona nto ibalulekileyo ibikukungasebenzi kakuhle kweebhanki zesizwe emva kweziphumo eziboniswe licandelo. Ukuze ngale ndlela, umgama omde wokuvalwa kweeveki ezine uye phezulu uye waphulwa. Ngapha koko, oku kukwehla kokuqala kwiseti yeeseshoni ezintlanu ukusukela oko kwenzeka ngo-2018.
Le ntshukumo kwiimarike zezabelo inokuqondwa njengophawu olucacileyo malunga nokuphela kwe I-rally yenkomo engalindelekanga ukuba inyanga yokuqala yonyaka isizisile. Kodwa kwelinye icala, isenokuma ukuthatha amandla ngakumbi kwaye uqhubeke nokunyuka kwiimarike zezemali ukusukela ngoku. Apho ngokungathandabuzekiyo elinye lamaqhosha liya kulala kwinto yokuba amanqanaba enkxaso kwimarike yaseSpain ngeli xesha iyahlonitshwa. Njengamaxabiso esitokhwe anokuba yinto yeqhinga lethu lotyalo-mali.
Ixabiso elinamaxabiso ahlengahlengiswe kakhulu
Ngale ndlela, enye yeendaba ezibalaseleyo kule veki iphelileyo kukuba enyanisweni ibhanki ibuye yafumana iintsuku ezimbi kwakhona. Ukuqokelela ngobunzulu obukhethekileyo beemeko ezahlukeneyo, ezinje ngokudodobala kwezoqoqosho, ukurhoxiswa kwenqanaba lenzala kunyuka okanye inzuzo ephantsi efunyanwa ziibhanki ezithile. Nangona ngokuchaseneyo, icandelo lezombane limiselwe kwi indawo yokuhlala yotyalo-mali yecandelo elilungileyo labasongi abancinci nabaphakathi. Apho uninzi lwabameli bayo bakwimeko yokunyuka simahla eyona nto ilungele iimfuno zabasebenzisi besitokhwe. Akumangalisi ukuba, bengekho abachasi ngaphambili.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuba uyixabise ngakumbi into yokuba kukho inani leenkampani ezidwelisiweyo ezinamaxabiso okhuphiswano kakhulu wokuthenga. Ngale ndlela, ayinakulityalwa ukuba ezinye zexabiso zinazo izaphulelo ukuya kuthi ga kwi-30% malunga nexabiso lakho ekujoliswe kulo. Into engayi kuqatshelwa yinxalenye enkulu yabalamli bezemali kwaye enokuthi ikhokelele kunyuso olongezelelekileyo kwiintsuku okanye kwiiveki ezizayo. Ngaphaya kokunye ukuthathelwa ingqalelo kwezobuchwephesha okunokuba nobunzima kumaxabiso alo alandelayo kwiimarike zezabelo.
Ngobomi obuncinci ngaphaya kwengxowa
Konke oku kwimeko yotyalo-mali ngokubanzi engachazwanga ngokupheleleyo. Apho, kufuneka sigxininise ukuba Ipremiyamu yomngcipheko waseSpain Ihlile le mihla ukuya kumanqaku esiseko se-106,0, ngelixa isivuno esifunekayo seminyaka eli-10 yebhanti yaseSpain inyuka yaya kumgangatho we-1,227%. Ngelixa ngokuchaseneyo, asinakulibala ukuba iimarike zezabelo zezona kuphela ezinokunika imbuyekezo ngokuhambelana nokulindelwe ngabatyali mali ngokubanzi. Kuba iimveliso ezivela kumvuzo osisigxina azivelisi umvuzo owamkelekileyo kwimidla yabasekeli.
Ngolu hlobo lokuba utyalomali lubonisa, imarike yemasheya kuphela kwendlela enokuba luncedo ngeli xesha. Nangona kusengqiqweni kunye nemingcipheko ebandakanyekayo kolu hlobo lomsebenzi kwaye ngowona mqobo uphambili kumthamo wesivumelwano ukuba unyuke kwiintsuku okanye kwiiveki ezizayo. Ngaphandle kwezabelo ezabiwe zezinye izabelo kunye nembuyekezo yazo kutyalo-mali olutyaliweyo inokufikelela kwi-8%. Phezulu kunoko kunikwa zezinye iimveliso zebhanki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Isiqingatha sokuqala sonyaka sonyusa kwimarike yemasheya
I-ECB iya kubeka isantya kwiimarike zesitokhwe zaseYurophu kwi2019